Zuckerberg miasa amin'ny Wifi drôna ho an'ny faritra lavitra - News Fitsipika
Zuckerberg miasa amin'ny Wifi drôna ho an'ny faritra lavitra
FACEBOOK CEO Mark Zuckerberg no voalaza drafitra mba hitondra ny aterineto ho lavitra vondrom-piarahamonina mampiasa drôna.
Eo ambany fiahian'ny ny tsy soa internet.org fikambanana, Zuckerberg nanambara fa efa niasa tamin'ny NASA Ames Research UK Centre sy ny orinasa drôna Ascenta ho mpisava lalana herin'ny masoandro Powered unmanned fiaramanidina ny sakamandimby Wifi avy any amin'ny lanitra.
Manana ny hevitra mitovy amin'ny aterineto goavana Google fikarohana ny drafitra mba hanafaka ny fidirana aterineto amin'ny alalan'ny balaonina eo ambanin'ny lohateny mampiahiahy “Project Loon”.
Izany Efa ho herinandro ho be atao ny Facebook tycoon rehefa avy nandriatra amin'ny $ 2bn for virtoaly zava-misy headset orinasa Oculus VR. Ny hetsika dia nahazo ny valifaty avy amin'ny olona nanontany ny antony manosika, ary dia toa izay efa nisafidy ny hamarana ny herinandro niala tsara tsiro kokoa amin'ny olona ny vavan'ny.
Iray fiheverana fa ny rollout ny drôna Wifi rafitra ho lany, ary University of Sheffield injeniera mety ho hita ny valiny ao amin'ny 3D pirinty fiaramanidina.
Ny Advanced Manufacturing Research Centre (AMRC) ao amin'ny Oniversiten'i Sheffield efa nanao ny 1.5m maneran-nitranga fahiny iray unmanned avy eny ambony fiara (UAV), milanja eo ambany 2Pj sy nanamboarany avy thermoplastics.
Amin'izao fotoana izao dia afa-tsy ny drôna no ampiasaina ho toy ny glider, Na izany aza ny fitambaran'ny fanampiny 3D pirinty faritra sy mora vidy elektronika singa, ny UAV mety ho mora, disposible amin'ny teny fitaterana tena tsara ho an'ny nandatsaka an-ady faritra, nokleary sy ny hafa hotzones mafy hanatratra na fahavalo tontolo.
-Tsy mety manao ho tonga lafatra fomba nanakodia avy ny ambony internet.org fanirian-daza noho ny drôna Wifi Network.
Ity lahatsoratra ity, Zuckerberg miasa amin'ny Wifi drôna ho an'ny faritra lavitra, ny mpilaza vaovao avy amin'ny The manontany ary nandefa eto nahazoana alalana.
20494	1 Facebook, Google, Mark Zuckerberg, Wifi
← Mavericks OS efa mihazakazaka amin'ny 40 isan-jato ny Apple Macs Korea Avaratra voady tsy mba hanapaka avy fanandramana nokleary vaovao →